दशैंअघि नै टोपबहादुर रायमाझीलाई उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनाईने ! - Sidha News
दशैंअघि नै टोपबहादुर रायमाझीलाई उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनाईने !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंअघि नै टोपबहादुर रायमाझीलाई उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री बनाउनेगरि तयारी थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै गरेको मन्त्रिपरिषद हेरफेरमा ईश्वर पोखरेलसँग खोसेर रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । पार्टीमा संकटमा परेको बेला आफूलाई साथ दिएका नेताहरुलाई ओलीले छानी छानी अवसर दिएका छन्।
अब रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याउन ओलीले आफूनिकट नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि सहभागिता थियो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेतद्धय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर मोर्चाबन्दी रायमाझीले ओलीलाई साथ दिएका थिए।
उनले एकता महाधिवेशनसम्म ओलीलाई नै निरन्तरता दिनेबारे आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । र, उनले आफूलाई ओलीकै खेमामा उभ्याएका थिए । रायमाझीले पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रभु साह, हरिबोल गजुरेल, लेखराज भट्ट र मणि थापालगायतका नेताहरुलाई पनि ओलीकै पक्षमा उभ्याएका थिए ।
ओलीले रायमाझीको त्यही गुण तिर्नको लागि पनि यसपटक उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व दिने तयारी गरेका छन्। रायमाझी यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्ति भएकोले यसपटक पनि उपप्रधानमन्त्री नै दिएर रायमाझीको प्रोटोकल म्यानेज गर्ने बालुवाटारको योजना छ । रायमाझीले यसअघि नै रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँगको कुराकानीमा आफूलाई उपप्रधानमन्त्रीसहितको जिम्मेवारी दिएमात्रै सरकारमा जाने नभए नजाने भनेर स्पष्ट पारिसकेका छन्। रिपोर्टस नेपाल
‘म गरिब हुँ’ भन्ने फारम भरेपछि कोभिडको उपचार निःशुल्क
गुह्येश्वरी गर्भगृहको १७३.५ तोला सुन गायब ! खिइएर हराएको संस्थानको दाबी
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त
बिपी प्रतिष्ठानमा पनि धरौटी राख्नु पर्ने; पैसा नतिरेको ३९६ स्वाब फिर्ता
कोरोनामुक्त भएनन् रोनाल्डो, बार्सिलोनाविरुद्ध खेल्न नपाउने
लोकगायक श्रेष्ठको निधन